Inkxaso: kopa, intlawulo - Practice - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Inkxaso: kopa, intlawulo - Practice
Wesithili inkundla eza kungena umvuzo okanye yomvuzo
Alimony yi isixa imali ehlawulweyo nge omnye umntu omnye kwi-uphumezo a isondlo obligationKule, differs ukususela compensatory isixa ukuba ufuna lungiselela i-disparities kwi-amanqanaba abahlala ye-amaqabane yintsholongwane wokuqhawula umtshato. I-pension ukutya ingaba obligation zabazali ukugcina abantwana babo, oko kukuthi, ukuba ahlangane iimfuno zabo. Kwimeko apho omnye amaqabane uyala ukuba negalelo eqhelekileyo iindleko i-khaya, ezinye angenza isicelo ijaji ukunyanzela kwabo inxaxheba financially ukuba inkcitho enxulumene isondlo abantwana. Kwi-umahluko, kwimeko okunokukhethwa kuko zabazali, alimony ifumanise yayo isizathu sokuba abe. Kubalulekile kakhulu ngenxa abantwana, kodwa lowo utshate naye unako inzuzo ngexesha wokuqhawula umtshato iingxoxo. Isixa-mali alimony iqinisekile conventionally phakathi kwamaqela (kuquka kwimeko a wokuqhawula umtshato yi-mutual kwemvume), noba yi umgwebi.
Iindleko le nkqubo bamele ukuyinyamezela yi-debtor
Umgwebi kuya kule meko ukuthatha kwi-akhawunti zahlukeneyo imithombo ye-creditor kwaye debtor.
Oko unako kanjalo bathabathe ingqalelo nokubonisa ye-INSEE (national Institute of ingqokelela yamanani) enxulumene iindleko ophilayo.
Kunokwenzeka revised nangaliphi na ixesha ngalo isicelo we-beneficiary ye-pension okanye omnye lihlawulwa ngubani, ukuba kukho utshintsho imeko xa omnye ex-amaqabane okanye i-evolution ka iimfuno zomntwana. Kwimeko remarriage okanye cohabitation ka-lomamkeli: alimony ihlawulwe kwi ex-mlingane) kwaye encinci abantwana nomcimbi a deduction ukusuka taxable ingeniso: Kukho ezahlukeneyo kuthetha ukunyanzela ex-mlingane ukuhlawula umntwana inkxaso:saisiesIl ingaba eziliqela iifomu ka-igalelo: kufuneka isicelo yenkundla uphumezo, kwaye kwangoko ukuya bailiff kuba seizure-mbasa. Ungeniso ikuvumela ukuba kuxhamla intlawulo bonke arrears ka-pension phezulu ukuya kwiminyaka emihlanu. Oku route ngu preferable ukuba omnye ufuna ukubuyiselwa unpaid eyilwayo ngaphezu ezintandathu, apho intlawulo ngqo ngu ineffective.
Intlawulo directUn wesithathu, (nge - umzekelo ebhankini okanye umqeshi ye-ex-mlingane) iya kuhlawula ngqo i-pension ukuya kwindawo defaulting debtor.
Kukho ubani ukuba ibe deadline ubuncinane engafikanga ibe ihlawulwe kwi-umhla osisigxina.
Kubalulekile ukuba kuhlangatyezwana a bailiff, ukuba ngaye lowo kufuneka angenise isihlalo fixing umntwana inkxaso kwaye zonke ezifunekayo ulwazi kwi debtor.
Oku kukuvumela ukufumana sums ngenxa kuba ezintandathu ngaphambili isicelo. Sinako na yiya ngaphaya Le ndlela kuphela kakuhle ukuba sele idilesi ye-debtor kwaye ukuba wone a iityuwadefault colour ingeniso. Uluntu imali I-pension wakhe ufuniwe yi-accountant Jikelele kwicandelo lolawulo-Wonke Ezemali (DGFiP) xa irhafu.
Kufuneka ube sele balingwe ngaphandle kwempumelelo omnye awandulela iindlela, oko kuthetha ukuba unpaid isixa babe yokugqibela iselwa ixesha elide, kwaye, kunjalo, yenza nzima imeko ye-creditor.
Kubalulekile kakhulu kakuhle indlela ukuze ufumane intlawulo yokugqibela ezintandathu mimiselo ngenxa kwaye mimiselo elizayo. Le nkqubo ngaphandle kwentlawulo Kubalulekile ukuba kuhlangatyezwana woluntu prosecutor le inkundla kuqala umzekelo we-domicile ye-creditor. Kuyimfuneko ukuthumela ebhalisiweyo ileta kunye ukwazisa info: whatsthis ka-kokuba zifunyenwe, kwaye ziquka: Usebenzisa Izibonelelo imali FamilialesLes imali kuba usapho Izibonelelo (i-orange caf) ingaba inkonzo ukunceda abazali kuba imali yesondlo intlawulo imali eseleyo kuba ngaphezu kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Abazali unako nokufumana imali evunyelweyo osapho inkxaso njengoko i-phambili kwi-pension unpaid. Intlawulo oku imali evunyelweyo uza ngokuzenzekelayo phinda-phinda ukuphunyezwa komgaqo-imali inkonzo. I-FCA unelungelo ukusungula okanye ukuqhubeka nayiphi na intshukumo ngokuchasene(s) umzali(s) default(s) kuba refund le imali evunyelweyo usapho inkxaso ihlawulwe. Iimfuno kuba claiming i inzuzo esi sabelo ngala alandelayo: kwimeko inxalenye yentlawulo, kuya kuhlawulwa a yahlukile imali evunyelweyo supplementing isixa-mali kanye ngexesha elifanelekileyo. Abazali ezingekho isolated asingawo anelungelo lokuba usapho ingeniso inkxaso kodwa abavumelekanga ukuba inzuzo kwi-ncedo lomthetho ingqokelela inkonzo kuba umntwana inkxaso hayi ihlawulwe (phezulu ukuya ubukhulu amabini eminyaka) kwi-idolo ka-encinci abantwana. Kuyimfuneko kuba yona kuba sele wanikela ubuqu ye-izahlulo ukwenza intlawulo ye-pension kwaye ukuba ezi iintshukumo bengengabo ngempumelelo. Usapho Izibonelelo Imali unako kanjalo kuba eliphetheyo le imali yesondlo kuba lowo utshate naye, ex-mlingane kwaye abanye abantwana i-debtor, kuquka sums ngenxa ngokubhekiselele i-compensatory intlawulo okanye wabelane, ekupheleni nezibonelelo.
Lawyer, ulwaphulo-mthetho - Ooreka